In deegaanka maanta warbaahinta-hodan, ma jirto wax yaraanta qalabka kala duwan waxaad ka ciyaari kartaa file ah oo ku saabsan. Si kastaba ha ahaatee, qalab loo maqli kasta waxa uu leeyahay qaab warbaahinta looga baahan yahay ka duwan. Tusaale ahaan, ka weyn casriga ah Android si sax ah ugu ciyaari karaa .MP4 videos, laakiin diidaan, haddii qaab video kale oo ku xusan xal gaar ah. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay gabi ahaanba hab si loogu badalo ka mid ah qaab warbaahinta kale, doorbidan wax eber tayada khasaaro.
Part1: Best OGG in MP4 Video Converter
Part2: OGG Free in Converter MP4
Part3: Aqoonta Extended u OGG iyo MP4
Wondershare Video Converter Ultimate waa hal barnaamij oo kale oo kaa caawin kara in aad u guurto file u dhexeeya qaababka, oo halkan qalabka, oo la eber tayada khasaaro. Wondershare Video Converter Ultimate Waa hodan leh, ayaa interface ah Begovic waa isla markiiba uuga by laawe ah, laakiin sidoo kale yimaado kala duwan loo siman yahay fursadaha sare sugaya user khibrad u wadday.
Marka la rakibo, Wondershare Video Converter Ultimate ah (WVCU) laftiisa dhexgalaan doonaa nidaamka qalliinka oo ay kobciso macno menu xaq-click iyadoo labo ikhtiyaar: "Beddelaan" iyo "Guba", soo gaabiyey waqtiga ay u qaadan lahayd haddii kale waxaad inay ugaarsadaan iyo laboriously jiidi & hoos u files diirada u galay Converter ah. WVCU sidoo kale wuxuu ahaa awoodaan in ay si sax ah loo aqoonsado iyo shuban file DVD badbaadiyey on disc adag sida .IFO iyo .VOB ah oo loogu badalo files soo galeen .MP4 aan ku xirid ah.
Mase u "Download" gudahood WVCU ogolaan doonaa in aad kala soo bixi videos si toos ah uga websites, sida Youtube. Dhab ahaantii, Converter si toos ah wuxuu hubin doonaa si loo arko haddii aad soo guuriyeen link ah oo si toos ah paste. Ayaa video soo bixi ka dibna waa la xoori karo qalab kasta oo u dhow, sida PS3, Apple TV, Chromecast, Roku iyo wixii la mid ah.
Video ayaa sidoo kale loo gudbin karaa qalab mobile si sahlan ugu sarreeya. Marka gujinaya ah "Transfer" button, code QR ah arbushin doonaa, jidaynayey wax qalab mobile in ka akhrisan kartaa codes QR si ay u awoodaan si ay u helaan file in uu soo bixi. Haddii kale, video la gubay karaa in disc ama badaley.
Talaabooyinka ee diinta OGG in MP4
Talaabada 1: Jiid & hoos u file diirada .OGG gelin Wondershare Video Converter Ultimate .
Talaabada 2: format MP4 waa in lagu soo xulo default, laakiin haddii aanay, guji arrow dropdown iyo dooran MP4. Markaas, guji "Beddelaan".
Tallaabada 3: Marka diinta la dhamaystiro, Taad oo doog ah ayaa soo bixi doona, oo ay la socoto erayga "uga dhammaatay". Markaas, riix "folder Open" button iyo aad u hesho file, haatan qaab MP4.
Waxaa jira xoolo ah oo lacag la'aan ah converters file-format laga heli karaa internetka, offline iyo qalab online si ay u qanciso xitaa user ugu culus labada. Laakiin, qaar badan oo iyaga ka mid ah la iman xiskoodu qarsoon oo aan isla markiiba muuqata ka hor inta rakibo. Dadka isticmaala dad badan, waxaa jira mid ka mid walaac kaliya - Sidee baan ku heli Converter ah warbaahinta file in si fudud u shaqaysaa? Mid ka mid ah Converter sida in si fudud u shaqaysaa iyo farxad ah in la isticmaalo waa Wondershare Video Converter Free e (WVCF).
WVCF waa degdeg ah, is haysta oo hufan multi-aalad in karaa download, diinta, gubi iyo ciyaaro video files of qaabab kala duwan.
Goobaha Converter ayaa ku dhow inay "Smart Fit" by default, taas oo macnaheedu yahay isku geynta ee la dhisay-in si toos ah go'aansan doonaa waxa aan sameyn si ay u abuuraan file a in uu leeyahay dheelitirka fiicnayn dhaxeeya baaxadda iyo tayada. Tani waa fikrad cajiib ah, sida ay gun gaadhaa qaar badan diiddani goob Converter dhaqameed ka hor. Haddii dhibaatooyin ha sara joogso, eegaan bar horyaalka ee Converter ah oo guji icon shanaad ka xaq. Tani waa dhamaystiran, caawimo weli la heli karo menu in aad tusi doonaa workarounds ugu badan oo la rajeenayo in dhib.
Dhammaan faylasha lagu biireen karaa file hal, taas oo ilaa xad wax yaabahan fiican in streamlines video tafatirka. WVCF sidoo kale yimaado oo la dhisay-in ciyaaryahanka video yaqaan Wondershare Player ah, heli adigoo riixaya "Play" tab ee Converter ah.
Talaabada 1: Jiid & hoos u file diirada .OGG soo galeen Wondershare Video Converter Free ah.
Waa maxay OGG?
In suuqa ee files warbaahinta, waxaa jira xoolo aad u fiican oo ah qaabab file kala duwan. Dhab ahaantii, shirkad kasta oo weyn oo farsamada ayaa isku dayay, at hal dhibic ama mid kale, si ay cadaadis ay qaab file warbaahinta aad u gaarka ah in rajada labada fogaado-gudubka xuquuqda kara iyo in la abuuro a "beerta deyr leh" lahaansho halkaas oo ay u kaxaynayno doono iyo caano users ah.
Muddo, taasina waa sababta keentay qalalaasaha kaalama shirkad kasta oo ula kac ah ay nolosha ku adkeysay user dhamaadka, kuwaas oo doonayay in ay daawadaan hamaansasho ah cute qalafsaneyn carabiyo. Si loo xaliyo ismari waa tan, qaab file .OGG la abuuray sanadkii 1993, isagoo qasdigiisu yahay in la qabto waxa ay ugu danbeyn noqday qaab file warbaahinta kama dambaysta ah, socon dhamaan qalabka iyo nidaamyada hawlgalka aan baahida loo qabo in software dheeraad ah ama hardware.
Si kastaba ha ahaatee, Apple uusan rabin in uu lumiyaa Gornadahanaga noogana by Quusan macruufka ah "beerta deyr leh" waxa uu abuuray ilaa iyo haatan, Google ma rabto in aad isticmaasho .OGG midkood, sida lagu qiyaasay diinta ee maktabadda oo dhan YouTube galay waxa ay noqon doonta in ku dhow wax aan macquul aheyn , halka Microsoft si fudud u diiday in ay galaan wada hadalka oo kusaabsan .OGG wadajir. Sidaa awgeed, ku riyoonayo .OGG maalin maalmaha ka mid noqdo qaabka file warbaahinta kama dambaysta ah ay dhinteen, inkastoo taageerada warbaahinta kasta oo ciyaaryahan iyo browser waxaa.
Sidaas oo ay tahayna, dadka isticmaala Linux isticmaali files .OGG ballaadhan, sida ay tahay qaab gebi furan il file ah oo sidii oo kale ku jiraa line falsafada Linux ah.
Sida loo ciyaaro OGG on Windows iyo Mac?
Dhamaan ciyaartoyda warbaahinta iyo daalacashada karaa, by default, taageero iyo ciyaaro .OGG files aan wax dhibaato ah. Dadka isticmaala Windows, Windows Media Player waxaa loo isticmaali karaa, haddii ay codec ku haboon waxa lagu xiraa, halka users Mac isticmaali kartaa Lugood ama iMovie la XiphQT 0.1.9 baakada ku rakiban codec, diyaar u ah free website-ka Xiph.org.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan OGG in MP4 la Loss Tayada Zero